‘हिस्ट्री ०७’ मात्र होइन, ‘भिजन ८७’ को पनि कुरा गरौं - Karobar National Economic Daily
‘हिस्ट्री ०७’ मात्र होइन, ‘भिजन ८७’ को पनि कुरा गरौं
query_builderMarch 26, 2017 11:00 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility19688
नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मा । तस्बिर : दिपक गाउँले
विश्वप्रकाश शर्मा, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् । कांग्रेसभित्र वैचारिक क्षमता भएका नेता शर्मा नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदै हाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य छन् । ‘संघीयता गाउँ जान भन्छ’ भन्दै केही वर्षयता गृह जिल्ला झापामै बस्न थालेका शर्मा आजदेखि सुरु हुने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौंमा छन् ।
विगतको इतिहास दोहो-याएर देश नबन्ने भन्दै उनी १५ वर्षे राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अभियान अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । अहिले राजनीतिक दलहरू एउटा थलोमा आउनका लागि प्रयत्नशील रहेको बताउने शर्मा इगोका कारण दलहरू निकट हुन नसके पनि छिट्टै यो स्थितिको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण नभई राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धि खुइलिँदै जाने भएकाले दलहरूले अब सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
समाजलाई तोड्ने होइन, आपसमा जोड्ने नवीन राष्ट्रवाद अहिलेको आवश्यक्ता रहेको बताउने उनै युवा नेता शर्मासँग घोषणा भइसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयनका जटिलता र कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलाल र तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानी :
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरू असन्तुष्ट छन् । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले राजनीतिक दलहरू एउटा थलोमा आउनका लागि प्रयत्नशील छन् । एकै ठाउँ आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ, किनभने सबैले निर्वाचनको माग गरेका हुन् । निर्वाचनमार्फत नै नेतृत्व चयन गरेर अघि जाँदा भोलिका दिनमा सहज हुन्छ ।
यो विषयमा नागरिक पंक्ति र राजनीतिक नेतृत्व पनि सहमत छ । त्यसैले आगामी वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा संविधान संशोधन गर्न दलहरू एक ठाउँमा आउन प्रयत्न गरिरहेको तर कतिपय कुराका सन्दर्भमा मुद्दाका कारण भन्दा पनि इगोका कारणले दलहरू निकट हुन नसकिरहेको अवस्था छ । मलाई लाग्छ, यो स्थिति चिरिनेछ, चिरिनुमै मुलुकको भविष्य छ ।
यहाँले इगो र मुद्दाको कुरा गरिरहँदा सत्ताभन्दा बाहिर रहेका असन्तुष्टि त छँदै छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । यो अवस्थालाई हेर्दा यो इगोको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
मैले बेला–बेलामा भन्ने गरेको छु, इगो र इन्डियालाई साइजमा राख्ने हो भने नेपालको भविष्य सुन्दर छ । त्यसको अर्थ यो होइन कि छिमेकसँग सम्बन्ध रहनु हुँदैन भन्ने होइन । त्यसको अर्थ यो पनि होइन कि इगो शून्य हुन्छ । तर, त्यसको एउटा सकारात्मक बाटोचाहिँ हुनुपर्छ । राणाशासन अन्त्य भएको ६६ वर्ष भयो । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको २७ वर्ष भयो ।
इगो र इन्डियालाई साइजमा राख्ने हो भने नेपालको भविष्य सुन्दर छ ।
राजसंस्था अन्त्य भएको पनि १० वर्ष भयो । हामी यस्तो एउटा परिवर्तनमा पुग्छांै र त्यसपछि देशको अवस्था सहज होला भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन । देशमा जे–जस्तो विषमताको अवस्था छ । त्यो विषमताको अवस्था बुझ्ने हो भने ती चित्रले दलहरूलाई रूपान्तरित हुन बल पु¥याउँछ र त्यो दिशामा नगई दलहरूसँग अर्को विकल्प छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरामा कतिपयले अझै आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् नि ?
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा जुन मात्रामा दलहरूले विश्वसनीय वातावरण बनाउने, निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । त्यो वातावरण बन्न नसक्दा वैशाख ३१ मा निर्वाचनमा हुने सन्दर्भमा कहीँबाट आशंका उठ्छ भने त्यो अनौठो होइन । राजनीतिक दलहरूले वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा जाने भन्दा दलहरूले निर्वाचन गर्नका लागि यो–यो गर्नु जरुरी छ भनेर अघि बढ्नुपर्छ ।
म निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुन सक्दैन भनेर भन्दिनँ । निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा जे–जस्ता आशंका उब्जिएका छन्, ती आशंका कमजोर छन् भनेर पनि भन्दिनँ । त्यसले गर्दा निर्वाचन सम्भव तुल्याउनका लागि दलहरूले संविधान संशोधन गर्ने । संशोधनका ४ प्रस्तावित बुँदा छन् । त्यसमा सहमति हुन सक्दैन भने सहमति हुन सक्ने बुँदालाई संशोधन गर्ने । त्यो भनेको सीमांकन हेरफेरको कुरा छोडेर बाँकीलाई संशोधन गर्ने हो । त्यसरी जान सकियो भने वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन्छ ।
कांग्रेसले पनि देशमा देखिएका राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने कुरामा भूमिका देखाउन सकेन । राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका त खुम्चँदै गयो नि, होइन ?
भूमिकाको सन्दर्भमा आमरूपमा के लाग्न सक्छ भने कांग्रेसको आवाज कहाँनेर छ ? संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुन दिँदैनौं भन्ने मधेसको ठूलो आवाज छ । काठमाडौंमा पनि नेकपा एमालेको ठूलै आवाज छ संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न दिँदैनौं भन्ने । ठूला दुई आवाज सुन्दै गर्दा कांग्रेसको आवाज कहाँ छ ? भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा चासोको विषय हो ।
निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा जे–जस्ता आशंका उब्जिएका छन्, ती आशंका कमजोर छन् भनेर पनि भन्दिनँ । मलाई के लाग्छ भने जो मिलाउन र समन्वय गर्नलाई बसेको हुन्छ, जब दुई पक्षको द्वन्द्वको आवेगमा झगडा भइरहेको हुन्छ त्यसबेला मिलाउन बसेको भलाद्मीको आवाज सानो सुनिन सक्छ । यसको अर्थ कांग्रेसको आवाज छैन भन्ने होइन । कांग्रेसको आवाज भनेको एमालेलाई पनि विश्वासमा लिऊँ र सँगै एमालेले पनि बुझिदेओस् कि मधेसकेन्द्रित दललाई पनि विश्वासमा लिऊँ ।
त्यसैले हाम्रो त भनाइ के हो भने, जस्तो अस्ति मधेसमा एमालेले अभियान चलाउँदै गर्दा मधेसकेन्द्रित दलले अवरोध गरे । त्यो मधेसमा जहाँ विखण्डनको आवाज लिएर कुनै एक अमुख व्यक्तिले प्रदर्शन गर्न पाउँछ भने आफ्नो पार्टीको आवाज राख्नलाई केपी ओलीले किन नपाउने ? किनभने त्यो मधेस एमालेको पनि हो अनि एमालेले बुझिदिनुपर्ने पक्ष के हो भने देश मधेसीको पनि हो ।
त्यसैले कांग्रेसको आवाज सानो सुनिएको सन्दर्भ यो रह्यो । आजदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले कम्तीमा चारवटा कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । पहिलोचाहिँ संविधान संशोधन गर्न भनेर ल्याइएको प्रस्तावमा हामी जस्ताको तस्तै त्यही रूपमा जाँदै गर्दा पारित हुन सम्भव छैन भने परिमार्जित ढंगले जानका लागि तयार हुनुपर्छ । सीमांकनको कुराले ५ नम्बर प्रदेशमा जुन मुद्दा उठेको छ ।
त्यहाँको भावना बुझ्दै ३ बुँदामा मात्रै जाने गरी एउटा टुंगोमा पुग्ने । दोस्रो, राजनीतिक दलहरूका बीचमा संविधान संशोधनपछि निर्वाचन गर्ने अभियानमा जाँदै गर्दा फरक मत राखिरहेका दलहरू पनि छन्, त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसरता लिने ।
त्यसैगरी पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन, संगठन सुदृढीकरण, विभाग गठन, पदाधिकारी चयन गर्ने कुरामा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । चौथो कुरा बृहत्तर अभियान आमनागरिकमा नयाँ आशा, नवीन एकता, नवीन विश्वास, नवीन सद्भाव, सहिष्णुता, नवीन राष्ट्रवादको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
यहाँले राष्ट्रवादको कुरा उठाउनुभयो र नवीन राष्ट्रवाद भन्नुभएको छ । एमालेले पनि अहिले राष्ट्रवादको कुरालाई जोडबलले उठाएको छ । यो सन्दर्भमा यहाँले भन्न खोज्नुभएको नवीन राष्ट्रवादचाहिँ कस्तो हो ?
एक जना विद्वान्ले भनेको मैले सुनेको थिएँ, राष्ट्रवादले फोड्छ, राष्ट्रप्रेमले जोड्छ । यो आफैंमा वाद हुनुपर्ने कुरा होइन । कसैले आफ्नो देशलाई कहीँ कुनामा बसेर प्रेम गरिरहेको छ भन्दै गर्दा उसले गाउँमा बाटो बनाइरहेको छ, एउटा बिरामीलाई सहयोग गर्दैछ भने उसले राष्ट्रलाई प्रेम गरिरहेको छ ।
अब नवीन राष्ट्रवाद भन्दै गर्दा कुनै नौलो र सिद्धान्तको कुरा होइन यो । मैले मात्रै भन्न खोजेको के हो भने राणाले आफैंलाई मात्र राष्ट्रवादी सोचे अरू कोही राष्ट्रवादी होइन भने । देश कमजोर भयो । अर्को कालखण्डमा राजालाई लाग्यो, हामी मात्रै राष्ट्रवादी हौं, अरू कोही राष्ट्रवादी होइन । बीपी कोइरालालाई समेत पञ्चायतले अराष्ट्रिय तŒवका रूपमा राख्यो, देश ठीक ठाउँमा उभिएन ।
विखण्डनको आवाज लिएर कुनै एक अमुख व्यक्तिले प्रदर्शन गर्न पाउँछ भने आफ्नो पार्टीको आवाज राख्नलाई केपी ओलीले किन नपाउने ?
६ वर्षअघि मात्र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्दा भारतीय इसारा, भारतीय डिजाइनमा बनेको सरकार भन्ने लाग्यो । माओवादी मात्र यो देशको एक्लो राष्ट्रवादी अरू कोही राष्ट्रवादी होइन भनेजस्तो गरियो । अहिले आएर त्यही कुराको कपी पेस्ट केपी ओलीले गरिरहनुभएको छ । एक जना व्यक्ति र एउटा दलले मात्रै राष्ट्रवादको कुरा गरेर हुँदैन । मधेसी दललाई लाग्ने हामीबाहेक सबै मधेस विरोधी हुन् ।
एमालेलाई लाग्ने हामीबाहेक अरू सबै देशविरोधी हुन् । यो प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । मैले नवीन राष्ट्रवाद भनेर यत्ति मात्रै भन्न खोजेको नेपाल देशलाई समुन्नत बनाउन एउटा साझा परिकल्पनामा एक बनौं । हाम्रो देशलाई अबको डेढ दशकमा कसरी समृद्ध बनाउने ? रोजगारीको प्रशस्त अवसर कसरी सिर्जना गर्ने ? कसरी उद्योगहरूको विकास गरेर जाने ? जलविद्युत्को विकास अबको १५ वर्षमा कसरी गर्ने ?
कृषिलाई आधुनिक ढंगले लिएर जान्छौं भने १५ वर्षमा कस्तो होला ? हिस्ट्री सेभन मात्रै होइन, भिजन एट्टी सेभेनको पनि कुरा गरौं । हिस्ट्री सेभनेको ०७ सालको कुरा भयो । भिजन एट्टी सेभेन भनेको ८७ सालमा नेपालमा के हुन्छ ? त्यसको परिकल्पना गरेर एउटा ठाउँमा उभिएर गयौं भने त्यो पो राष्ट्रवाद हुन्छ त । त्यसले पो नेपाल देशलाई बलियो बनाउँछ त । हामी नेपाली एक ठाउँमा उभिनेबित्तिकै गोविन्द गौतमले गोली खाने घटना घटेर जान्छन् नि त ।
त्यसैले मैले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको एउटा साझा खाका बनाऔं, एउटाले अर्कालाई विश्वास गरेर जाऔं भनिरहेको छु । एक दलले अर्को दललाई गाली गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । सबै पक्ष सहकार्य गरेर जाऔं । सहकार्य सत्तामा रहेर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन । सत्ताबाहिर रहेर पनि गर्न सकिन्छ । साझा मुद्दामा एकढिक्का भएर गयौं भने त्यो नवीन राष्ट्रवाद हुन्छ ।
यहाँ पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिका सपना बाँडिन्छन् तर पूरा हुँदैनन् । भिजन ०८७ को सपना बाँडिरहँदा यो सपना पनि खण्डित नहोला भन्ने कुनै आधार छ र ?
निश्चय नै । राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने र त्यसको सुरक्षित भविष्यचाहिँ केमा निर्भर छ भने सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा । सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण घनिभूत ढंगले हुन सकेन भने प्राप्त उपलब्धि खुइलिँदै जान्छन् । त्यसैले नेपालमा ०७ सालपछिको ६६ वर्षमा केही नै भएन अथवा ०४६ सालको परिवर्तनपछिको २७ वर्षमा केही रूपान्तरण नै भएन म भन्दिनँ ।
सहकार्य सत्तामा रहेर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन । सत्ताबाहिर रहेर पनि गर्न सकिन्छ । साझा मुद्दामा एकढिक्का भएर गयौं भने त्यो नवीन राष्ट्रवाद हुन्छ ।
हामी हिजोभन्दा धेरै भौतिक प्रगतिको चरणमा छौं । हिंसा र अस्थिरताको बीचमा त यति गर्न सकिन्छ भने हामीले किन एउटा आर्थिक स्थिरताको प्याकेज नखोज्ने । मैले भन्न खोजेको के हो भने यसो गरे नेपाल राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने साझा प्याकेज बनाउन सक्यौं भने १५ वर्षमा १५ प्रधानमन्त्री आए पनि फरक पर्दैन । हामीसँग अहिले १५ वर्षमा देशलाई समुन्नत बनाउने भिजन छैन । तर, १५ वर्षमा एकै प्रधानमन्त्रीले शासन गरेर पनि हुँदैन ।
प्रश्न कति जना प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ ? भन्ने मात्र होइन, प्रश्नचाहिँ बनेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले के बोकेर जानुपर्छ भन्ने हो । देश विकास गर्न एउटा साझा प्याकेजको खाँचो छ । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै गर्दा आर्थिक स्थिरताको प्याकेज खोज्यौं भने देशलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ ।
देशले सोचेजस्तो फड्को मार्न नसक्नुका पछाडि नेपाली कांग्रेस मुख्य दोषी छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?
यसलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो दलले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीको भाग लिनुपर्छ । यसबीचमा जे–जति भौतिक प्रगति भएका छन्, त्यसको सबैभन्दा बढी श्रेय कांग्रेसकै भागमा जान्छ ।
यसबीचमा हामीले जति गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यति गर्न सकेनौं होला । कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार दलले अरूको आलोचना गरेर मात्रै हुँदैन । कांग्रेसले आत्मलोचना पनि गर्नुपर्छ । दोस्रो पाटो, सँगैको वस्तुस्थितिलाई हामीले हेर्याे भने बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि १८ महिनामा मुलुकमा जे–जति काम गरेको छ, आज भएका चीजहरू त्यसबेला रोपिएको जगमा भएका छन् ।
बीपीको संसदीय प्रजातन्त्रले वास्तवमा डेढ दशक पनि काम गर्न पाएन । हामीले कुन राजनीतिक दलले कति वर्ष शासन गर्याे भन्ने दृष्टिले मात्रै होइन, कुन राज्यव्यवस्थाले कति शासन गर्याे भनेर हेर्दा १ सय ४ वर्ष राणाले काम गर्न पाएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाले पनि ३० वर्ष काम गर्न पाएको छ ।
संसदीय प्रजातन्त्र जो वास्तविक आमनागरिक सहभागी रहने बाटो भनेर हामीले ठहर गर्यौं, त्यसले केही समय मात्र काम गर्न पायो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि ३ देखि ४ वर्षजति राम्रोसँग काम गर्न पायो । त्यसपछि राजाको कदमका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भयो ।
राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै गर्दा आर्थिक स्थिरताको प्याकेज खोज्यौं भने देशलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ ।
बीपीले काम गरेका बेलाको कालखण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको सुरुवाती तीन वर्षको कालखण्डलाई हेर्याे भने केही महत्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तनको कुरा देख्न पाइन्छ ।
अहिले नेपालमा जति भौतिक प्रगति भएका छन् ती बढावा दिने कुरा यसबीचमा भएका छन् । जसको बलमा आज हामी थोरै श्वास फेरिरहेका छौं । कांग्रेसले दोष लिनु हुँदैन म भन्दिनँ, लिनुपर्छ । सँगैमा हिंसा र अस्थिरताको बाबजुद प्रगति जुन भएका छन्, त्यसमा पनि कांग्रेसले लिएको नीतिका कारण भएका छन् ।
कांग्रेसले लिएको नीतिका कारण उद्योगधन्दा बन्द भए भन्ने आलोचना पनि छ । विशेष गरी आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीतिलाई लिएर बेला–बेला आलोचना हुने गर्छन् । यसमा केही परिवर्तनको खाँचो पनि देख्नुहुन्छ ?
कांग्रेसले भन्ने समाजवाद र कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने समाजवाद यी सबै विषय ४६ को परिवर्तनपछि संसारव्यापी रूपमा जुन आर्थिक उदारीकरणमा गएको थियो, त्यो विषयभन्दा भिन्न रहेर कुनै पनि देशमा उत्पादन हुन सक्ने र त्यसलाई न्यायोचित रूपमा वितरण हुन सक्ने र बाह्य लगानी भिœयाउँदै गर्दा आन्तरिक कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने बिल्कुलै थिएन ।
आर्थिक उदारीकरणका कारण बजारमा सस्ता सामान पनि आएका छन् । सँगै गाउँमा रहेका साना उद्योग विस्थापित भएका छन् । हामीले एकातर्फ छनोटमा रहेको कमजोरीका कारण यो अवस्था आएको हो ।
यही नीतिका कारण दुनियाँले फड्को मारेका छन् । यसैभित्र व्यावहारिकता हुन नसक्दा हामी कमजोर बन्यौं । उदाहरणका लागि जनकपुरमा कुनै अर्को देशले चुरोट कारखाना बनाइदिन्छु भन्दै गर्दा त्यहाँ चुरोट कारखाना बनाउन नेपालको प्राथमिकता थियो ? या जाजरकोटमा अस्पताल बनाउनु ? हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनौं । सरकारको काम खुट्टामा लगाउने जुत्ता उत्पादन गरेर बस्ने होइन ।
खुट्टाभन्दा अलि माथि रहेको पेटमा अन्न कसरी भर्ने भनेर सोच्ने र गर्ने हो । स्वास्थ्य शिक्षाको विषय राज्यको दायित्व हो । तर, त्यो हुँदै गर्दा नेपाली सेना र प्रहरीले लगाउँदै गरेको जुत्ता भारतबाट आयात गर्नुप¥यो । हामीले छालाजुत्ता कम्पनी बेचिदियौं । त्यसमा नेपाली कांग्रेस दोषी छ ।
सँगैमा हामीले राज्यको प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई समेटेर लैजानुपर्ने, सहज अवस्था बनाइदिनुपर्ने, बाहिरी लगानी भिœयाउँदै, बाहिरी सामानलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने दायित्व पनि छ । सँगै दोहोरो अप्ठ्यारो केमा पनि थियो भने एकतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, वल्र्ड बैंकको भावना चाहनालाई पनि हामीले सुन्नुपर्ने, अर्कातर्फ गाउँमा नुन तेल गर्न बाहिरबाट आउँदै गरेको विप्रेषण कुर्नुपर्ने ।
राज्यले त्यसमा समन्वय गर्दै गर्दा यताको दबाब र निजी क्षेत्रको बढोत्तरी हुँदै उसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बाँधेर जानुपर्ने यो कुराको सन्दर्भमा हामीले जति सौन्दर्यका साथ काम गर्नुपथ्र्यो । सन्तुलनका साथ काम गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेनौ । त्यसको अर्थ अहिले भइरहेको प्रगतिमा उदारीकरणको भूमिका छैन भन्ने होइन ।
कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ खुला छाड्यो र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा मौन रह्यो भन्ने गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षाका कुरामा कांग्रेस कम्युनिस्टभन्दा अनुदार देखियो भन्ने आरोप नि ?
भ्याट कसको पालामा आयो । आज राजस्वको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा छ । हिजो भन्सारबाट आउने हिस्सा ठूलो थियो । आज भन्सारबाट आउने राजस्व तेस्रो स्थानमा छ । तर, भ्याट लागू हुँदै गर्दा गाउँमा हलो जोतिरहेको सामान्य किसानले होइन, उद्योगपति व्यापारीहरूले तिरे । त्यो कसले ल्यायो ? आज एमालेले बाँडेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रशंसा गरिरहँदा एमालेले पनि सम्झनुपर्छ, ढुकुटीमा जम्मा कसले गरेको हो ?
मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुँदै गर्दा व्यवसायीले काठमाडौं बन्द गरेका थिए । धेरै वर्ष भएको छैन । त्यो व्यवस्था उद्योगपतिको विरुद्धमा भन्दा पनि नागरिकको पनि हितमा रहेछ । देशको हितमा रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । पुँजीगत लाभकरबाट पनि राज्यले ठूलो लाभ लिएको छ । यो कसको कारणले आयो । राजस्वको आकार ठूलो भयो भन्दै गर्दा सबैले धन्यवाद कांग्रेसलाई दिनुपर्छ । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन दुई कुरा चाहिन्छ ।
एउटा ढुकुटी भर्ने भिजन चाहिन्छ । किसानले बजारमा गएर भाले बेच्दा तिनुपर्ने कर र ठूला–ठूला कम्पनीलाई ठूलो आकारको करको दायरामा नल्याउने भन्ने हुँदैन । कांग्रेसले दायरामा ल्याउन मूल्य अभिवृद्धि करको कुरा पुँजीगत लाभकरको कुरा ल्याएर ढुकुटीलाई बलियो बनाउन योगदान गरेको छ । एमालेले लिएको नीतिका कारण ढुकुटीमा ठूलो आकारमा राजस्व भित्रिएको छ भन्ने छैन । बाँड्ने कुरा अर्को पाटो भयो ।
वृद्ध भत्ता गएको वर्ष (सुशील कोइराला) नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा ५ सयबाट १ हजार गरिएको तथ्यलाई समाजले सम्झँदैन । तर, हजारलाई २ हजार गरेको कुरालाई एउटा राजनीतिक दलको चुनावी लाभका लागि प्रयोग गरिन्छ । हामीले सेवा गरिरहेका छौं भन्ने मनोविज्ञान होइन । हामी भोट खरिद गरिरहेका छौं भन्ने मनोविज्ञानबाट अघि बढिएको छ ।
जुन देशको नागरिकको हातमा एक थरीले बन्दुक थमाउँछन्, अर्कोथरीले पासपोर्ट थमाउँछन् । त्यो देशले यो भन्दा बढी प्रगति गर्न सक्दैन ।
यस्तै गाउँमा जाने बजेटको सन्दर्भमा पनि ०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसको सरकार भएको बेलामा आएको बजेटमा अघिल्लो बजेटसँग तुलना गरेर हेरियो भने ७० प्रतिशत हिस्सा गाउँमा गएको थियो । प्रत्येक गाउँमा उपस्वास्थ्यचौकी बने । त्यो भनेको बजेट गाउँमा गएको हो । त्यसबाट कृषि, शिक्षा, खानेपानीमा बजेट गएको छ । जलविद्युत्मा भएको लगानीमा गएको बजेटचाहिँ नि ? २०४६ सालभन्दा अघि ९ प्रतिशत मानिसले विद्युत् बाल्थे ।
अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढीले बाल्छन् । यद्यपि भनेजस्तो प्रगति भएको छैन । जुन देशको नागरिकको हातमा एक थरीले बन्दुक थमाउँछन्, अर्कोथरीले पासपोर्ट थमाउँछन्, त्यो देशले योभन्दा बढी प्रगति गर्न सक्दैन ।
अहिले पनि त वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ठूलो छ । देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । आएको विप्रेषण पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । यसको अन्त्य कसरी गर्ने ?
सत्य कुरा के हो भने अमेरिकाका मन्छेहरू पनि त्यहाँभन्दा बाहिर गएर बसेका छन् । कोरियनहरू पनि क्यानडा जाने रुचि राख्छन् । क्यानडाका मानिस बेलायत र बेलायतका जर्मनी जान रुचि राख्छन् ।
इन्डियाका मान्छे पनि संसारभर छरिएका छन् । अमेरिकाको आईटीमा सबैभन्दा ठूलो होल्ड इन्डियनको छ । नेपालमा जन्मिएका सबै नेपालमै बाँच्नुपर्छ, यहीँ मर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु नेपाल दुईवटा छ । मेचीदेखि महाकालीको भूगोलमा फैलिएको एउटा नेपाल छ ।
त्यो नेपालसँग भूगोल पनि छ र भावना पनि छ । अर्को नेपालबाहिर छ । जोसँग भूगोल छैन, भावना छ । ४० लाखको संख्यामा फैलिएर बसेको त्यो नेपाल छ । नेपालीबाहिर फैलिरहेको कुरालाई कुन रूपमा बुझ्ने भन्ने हो । ब्रेन ड्रेनकै रूपमा भएका राम्राजति बाहिर गए, कसरी रोक्ने भन्ने एउटा पाटो हो । तर, बाहिर रहेको नेपाललाई नेपालको विकासमा कसरी जाँच्ने भन्ने अर्को पाटो हो ।
बाहिर रहेको नेपालसँग सीप पनि छ । पुँजी पनि छ । हामीले अब नेपालभित्रको नेपाल र बाहिरको नेपाललाई गाँसेर समुन्नत नेपालको परिकल्पना गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि गएको वर्ष ६ सय १८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो । त्यसको १० प्रतिशत मात्रै हाइड्रोमा हाल्ने हो भने भने अवस्था अर्कै हुन्छ । कार्यविधि बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले जुनसुकै माध्यबाट पठाए पनि त्यसको १० प्रतिशत हाइड्रोमा हाल्ने हो भने कति धेरै पैसा प्रयोगमा ल्याउन सक्छौ ।
सँगै हाइड्रोको मालिक को हुन्छ भन्दा इन्डियाको कुनै सतलज कम्पनी होइन, नेपाली नै हुन्छ । त्यसले विदेशमा रहेको नेपालीको देशप्रतिको प्रेम पनि बढ्ने भयो । ऊ चार वर्ष विदेश बसेर आउँदा उसले खर्चेको १० प्रतिशत पैसाबाट उत्पादन गरेको बिजुलीले उसलाई साउदी कतारमा कामाउने गरेको पैसा त घरमै दिने भयो नि ।
तेस्रो कुरा, हाइड्रोको बोनस खाएर बसिरहेकाहरूका लागि अफर बनेर राज्यले तरकारी उत्पादनमा जोड गरायो, उनको पैसालाई त्यहाँ घुमायो भने तरकारीको परनिर्भरता पनि हट्ने भयो । त्यसले मानिसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने भयो । बाहिर रहेको नेपाललाई कसरी गाँस्ने र त्यहाँको पैसालाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने भन्ने भिजन बनाउन आजको आवश्यकता हो ।
स्थानीय तह नेपाली कांग्रेस निर्वाचन विश्वप्रकाश शर्मा युवा नेता